Ithimba Lokuhlela Blusens | Izindaba zamagajethi
ActualidadGadget.com ingenye yamawebhusayithi ayizethenjwa eSpain ku amagajethi, isoftware, ikhompyutha, i-inthanethi nobuchwepheshe ngokujwayelekile. Kusukela ngo-2006 besilokhu sibika usuku nosuku ngentuthuko enkulu emkhakheni wezobuchwepheshe, futhi ihlaziya inqwaba yamadivayisi kusuka kumakhompyutha anamandla kakhulu kuya ezimweni ezilula zama-smartphone, kufaka phakathi izikhulumi, ama-monitors, ama-smartphones, amaphilisi noma ama-vacuum vacer ukuze unikeze izibonelo ezimbalwa. Nathi siya khona imicimbi ephambili yezobuchwepheshe zomhlaba njenge-WMC eBarcelona noma i-IFA eBerlin lapho sihambisa khona ingxenye yethimba lethu labahleli ukuze sikwazi ukwenza okuphelele ukulandelwa komcimbi futhi sinikeze abafundi bethu lonke ulwazi kumuntu wokuqala nangesikhathi esifushane kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, ku isigaba sethu sokufundisa ungangena kuzo zonke izinhlobo zolwazi olusebenzayo nge amabhukwana wezincwadi zesinyathelo ngasinye okubandakanya izithombe kanye / noma amavidiyo osizo futhi ahlanganisa izihloko ezahlukahlukene kakhulu ukusuka kuzo ungayifometha kanjani ithebhulethi ye-Android a ungasilanda kanjani isithombe ku-facebook ukunikeza izibonelo ezithile.
Uma ufuna ukubona ezinye izihloko esibhekana nazo kuwebhu kufanele uzenze nje finyelela ekhasini lezingxenye futhi lapho ungazibona zonke zihlelwe ngengqikithi.
Ukuze ukwenabe konke lokhu okuqukethwe kwekhwalithi nangendlela ebukhali kakhulu, Izindaba zegajethi zineqembu labahleli abangochwepheshe kwezobuchwepheshe obusha futhi nginolwazi oluningi lokubhala okuqukethwe kwedijithali. Uma ufuna ukuba yingxenye yeqembu lethu lokuhlela kufanele ugcwalise leli fomu futhi sizoxhumana nawe ngokushesha okukhulu.
Umhleli kanye nomhlaziyi weGeeky. Umthandi wamagajethi nobuchwepheshe obusha. Nginentshisekelo yokwazi nokuhlola zonke izinhlobo zamagajethi, ama-smartphone, amakhompyutha, amathebulethi, ama-laptops, phakathi kwabanye, futhi ngijabule ukuhlanganyela ulwazi lwami nezwe ngamagama.
Kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-90s, bengikuthanda kakhulu konke okuphathelene nobuchwepheshe kanye nekhompyutha. Ngalesi sizathu, ukuhlola noma iyiphi igajethi ephuma nayo lemikhiqizo emikhulu nemincane, ukuyihlaziya ukuze uthole okuningi kuyo, kungenye yezinto engizithandayo engizithandayo.
Ngithanda konke okuhlobene nobuchwepheshe nazo zonke izinhlobo zamagajethi. Bengilokhu ngihlaziya zonke izinhlobo zamadivayisi we-elekthronikhi kusukela ngeminyaka yama-2000 futhi ngihlala ngiqaphela amamodeli amasha asezophuma. Ngithatha ezinye ngihambe nazo lapho ngisebenzisa ezinye izinto engizithandayo, izithombe nezemidlalo ngokujwayelekile. Angeke afane ngaphandle kwabo!
Umthandi wobuchwepheshe obusha, kepha ikakhulukazi amagajethi. Ngazi kakhulu ngamadivayisi amaningi akhishwa unyaka nonyaka ukuze ngikwazi ukuthola amagajethi angithandayo kakhulu. Lapho sengitholile, ngibahlaziya ngokujulile ukuze ngazi izinzuzo abanazo.
Ngaso sonke isikhathi ubanjwe ngamagajethi nezinsiza zobuchwepheshe. Ngivivinya, ngihlaziya futhi ngibhale ngama-Smartphones kanye nazo zonke izinhlobo zamagajethi, izesekeli namadivayisi wezobuchwepheshe okwamanje. Ukuzama ukuba "on" njalo, funda futhi ugcine unolwazi ngazo zonke izindaba.
Ngiyabuthanda ubuchwepheshe, akuyona yonke into eyi-Apple ... ngicabanga ukuthi izinkampani eziningi ngokwengeziwe zithuthukisa izinto ezithokozisayo futhi silapha ukuhlola izindaba zakamuva zobuchwepheshe. Ngizama ukuthola wonke amagajethi engikwaziyo futhi angena endlini yami ...
Ngikuthanda kakhulu ubuchwepheshe, ngijabulela njengengane enamagajethi. Ngithanda ukuqhathanisa amamodeli ahlukahlukene, ukuthola izici ezintsha, nokwazi ezintsha ezisazofika. Amagajethi angenza izimpilo zethu zibe lula kakhulu, yingakho ngithanda ukuhlanganyela engikwaziyo ngabo.
Ngingunjiniyela othandana nobuchwepheshe obusha nakho konke okuzungeze inethiwekhi yamanethiwekhi. Amanye amagajethi engiwathandayo ahamba nami nsuku zonke, njengama-smartphones noma ama-tablet, amadivayisi asiza ukuthuthukisa ulwazi lwami nolwazi lwami kumagajethi.
Uchwepheshe wamakhompiyutha yize ethanda umhlaba wezobuchwepheshe ngokujwayelekile futhi enza amarobhothi, intshisekelo engiholela ekuphenyweni nasekuphenyeni yonke inethiwekhi ngifuna noma yiluphi uhlobo lwento entsha ngamagajethi, noma ngabe kwenzelwa ukutadisha noma iphrojekthi.
Ubuchwepheshe obusha buyisifiso sami seqiniso. Ngiyaqhubeka nokujabulela njengosuku lokuqala ngikhuluma nganoma iyiphi igajethi engena emakethe: izici, amaqhinga, ... ngamafuphi, konke konke nganoma iyiphi igajethi kagesi.
Nginentshisekelo enkulu kwezobuchwepheshe, ikakhulukazi izingcingo eziphathwayo. Ngiyakujabulela ukwazi izindaba ngamagajethi, nokuzihlola ukuthola, ngakho-ke, uma ziletha lokho ezikuthembisayo noma uma kungamagajethi angathandeki kangako usuku nosuku.
UGadgetmaniaco, othokozela ukuhlola amagajethi angasetshenziswa ukuziveza kunoma yiluphi uhlobo lobuciko. Ngaphezu kwalokho, ngiyathanda ukuhlola noma iyiphi igajethi engizwayo, ngakho-ke nginolwazi oluningi ngobuchwepheshe obusha futhi ngiyakujabulela ukuxazulula noma ikuphi ukungabaza okungase kuvele ngesikhathi sokusetshenziswa nokuphathwa kwayo.
Usosayensi wekhompyutha ojabulela njalo ukuphenya amagajethi amasha angena emakethe. Uma kunento eyodwa engithanda ukuchitha isikhathi sami samahhala nayo, ihlolisisa yonke imishini ye-elektroniki engiyitholayo.
Ngithanda konke okuphathelene nobuchwepheshe namagajethi. Ngihlala ngifuna ukufunda wonke amaqhinga anezinhlobo ezahlukene zamagajethi, alusizo kakhulu ekuphumuleni kwethu noma emsebenzini.
Intsha ethanda ubuchwepheshe kanye nezwe lezimoto. Ukwazi amagajethi ngokujulile, ukubona ukuthi asebenza kanjani noma athuthuke kanjani yinto engiyithandayo.
Ngingumfana othanda ubuchwepheshe. Ngithanda ukufunda inqobo nje uma kukuleyo ndaba, ikakhulukazi amagajethi. Noma ngubani uyangithanda, kepha ama-drones, i-automation kanye / noma i-automation yasekhaya nobuhlakani bokufakelwa bangubuthakathaka bami.
Amagajethi abelokhu engijabulisa, kepha ukufika kwama-smartphones kukhulise intshisekelo yami kukho konke okwenzekayo emhlabeni wezobuchwepheshe. Ngikholelwa ngobuqotho ukuthi akubanga khona igajethi engcono nengusizo kunalokho.
Ngikhathalele i-inthanethi nobuchwepheshe obusha, bengihlala ngithanda ukuzama wonke amagajethi awele ezandleni zami, ngithola konke abenakho, futhi ngikuqhathanisa nezinguqulo zabo zangaphambilini ukubona ukuthi ngabe sezithuthuke ngempela yini. Ngithanda ukwazi zonke izindaba ngamagajethi engiwatholayo, ulwazi engizothanda ukuhlanganyela nawe.